ExactTarget ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ Martech Zone
ExactTarget 2006 Inc 500 စာရင်းတွင်ပွဲ ဦး ထွက်
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနေ့ရုံးထဲမှာ buzz ရှိတယ် အတိအကျ။ ExactTarget သည် ၅၀၀ တွင်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောကုမ္ပဏီ ၅၆ ခုဖြင့် Inc 500 ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၀၂ မှ ၂၀၀၅ အထိ ExactTarget သည် ၅၆ ခုမြောက်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်သောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဝိုး! ငါတို့မခံစားဘူးလို့ငါမပြောရင်ငါရိုးသားမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့လုပ်သည်! ထိပ်မှာရှိနေခြင်းနှင့်တည်းခိုရန်စိတ်ဖိစီးမှုကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင်ကြီးမားသောအစပျိုးမှုများကိုလုပ်ဆောင်နေသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများကိုပြန်လည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒေတာစင်တာများကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
ExactTarget သည် Inc ၏ ၅၀၀ စာရင်းတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်သောကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင်အဆင့် ၅၆ ရှိသည်။
ဒီအလုပ်တွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ရက်သာရှိသေးသလိုခံစားရတယ် ExactTarget နှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးသောအရာမှာ၎င်းသည်အခွက်တဆယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ချို့တဲ့သောမည်သည့်အင်္ဂါရပ်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်သူများထံမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသူများအတွက်အစားထိုးသည်။ ငါထင်တာကတော့ဒီကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကတစ်ခါတလေမျက်ခြည်ပြတ်သွားတာ၊ သူတို့အလုပ်ပြုတ်တာ၊ လှိမ့်နေတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ငှားရမ်းတာတွေလုပ်လေ့ရှိတယ်။ လူ့စွမ်းရည်ဆိုတာကုမ္ပဏီရဲ့အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှအသိအမှတ်မပြုဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူစွမ်းရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါ လာရောက်၍ လုပ်ဆောင်နေသောအရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များကိုတောက်ပသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ရိုးရှင်း။ ခွန်အားကောင်းသောအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်များဖြင့်အံ့အားသင့်စေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြန့်ချိမှုအချိန်ဇယားသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်သန်မာပြီးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်! ExactTarget အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာကိုမင်းမကြားရဘူးဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုကုမ္ပဏီရဲ့နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ထပ်တူမကျစေချင်လို့ပါ။ ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်ကျွန်ုပ်အလုပ်၏တာဝန်ဝတ္တရားများသာဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းတွင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်ကူညီသည်။ သို့သော် Blogger တစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်၊ စျေးကွက်နှင့်သူတို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ExactTarget အကြောင်းကိုမကြားရသေးလား။ ငါတို့သာစတင်ခဲ့ပြီ။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုစျေးကွက်ကို Grouper ယူနိုင်သလား။